Window Update ပိတ်ချင်ရင်ဖြင့် ~ မျိုးကို
Window Update ပိတ်ချင်ရင်ဖြင့်
08:20 Technique, Window Update, Window72 comments
၀င်းဒိုး ကော်ပီ တွေ သုံးတဲ့ အခါမှာ အော်တို Update တွေ ကြောင့် မကြာခဏ ဆိုသလို ပြန်ပီး အဖျက်ခံ ရတဲ့ သူတွေ အတွက် ၀င်းဒိုး Update ကို ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအဆင့်လေးတွေ အတိုင်း လုပ်ဆောင် ကြည့်ပါ..။
1. Start က Search မှာ Window Update လို့ ရိုက်ပီး ရှာလို့ ရသလို Control Panel ထဲ တိုက်ရိုက်သွားရှာ ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်..။
2. Change Setting ကိုသွားပါ..။
3. ပုံမှ ပြထားသလိုလေး Never Check ကို ရွေးချယ်ပီး OK လိုက်ပါ..။
4.နောက်ပီး Action Center က Warning ပေးတဲ့ Message ကိုပိတ်ဖို့ အတွက်တော့ Control ထဲမှာပဲ Action Center ကို ပြန်ရှာလိုက်ပါ..
5. Change Action Center Setting ကိုသွားလိုက်ပါ..။
6. ပုံမှာ ပြထားသလို အမှန်ခြစ်တွေ အားလုံး ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ..။
san thit aung 14 July 2012 at 20:56
အစ်ကိုပြောသလိုတော့ လုပ်လိုက်ပြီးဗျ...Update မပေးတော့တဲ့ အခါ Window က ဘာမှတော့ မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား..။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..အစ်ကို ကျန်းမာပါစေ..................
shwe lin 11 November 2013 at 12:56